Tag Archive for "उच्च तापक्रम" - भारतको तापक्रम अत्यधिक उच्च, एक जना किसानको मृत्यु !
भारतको तापक्रम अत्यधिक उच्च, एक जना किसानको मृत्यु !
एजेन्सी । भारतको सुख्खा क्षेत्रमा पर्ने शहरको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सीयस पुगेको छ । पछिल्लो तीन दिनमा तापक्रम दोस्रो पटक यति धेरै बढेको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । देशको राजस्थान प्रदेशमा पर्ने चुरुको तापक्रम ५०.३ डिग्री सेल्सीयस पुगेको समाचारमा जनाइएको छ । यसअघि गत शनिबार ५०.६ डिग्री सेल्सीयस पुगेको थियो । यो देशकै सवैभन्दा उच्च तापक्रमको नजिक पुगेको हो । भारतमा सन् २०१६ को मे महिना... थप पढ्नुहोस्
स्वीट्जरल्याण्ड । अहिलेसम्मको रेकर्डअनुसार सन् २०१८ मा विश्वको तापक्रम चौथो उच्च रहने देखिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घले यो बर्षको तापक्रमसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम नियन्त्रणका लागि आवश्यक ध्यानाकर्षण गर्न उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको जनाएको छ । पोल्याण्डमा हुन लागेको कोप २४ जलवायु शिखर सम्मेलन हुन केही दिन बाँकी रहेका समय सार्वजनिक... थप पढ्नुहोस्